Ebili mmiri na-adịghị mma: gịnị bụ ha, njirimara na ụdị | Netwọk Mgbasa Ozi
Ala ọma jijiji ma ọ bụ ala ọma jijiji na-amalite n'ihi mmegharị nke efere tectonic. Ọ bụ n'ihi na efere ndị a na-aga n'ihu na-ahapụ ike n'oge mmegharị a. Enwere ike ibute ala ọma jijiji site na mgbawa ugwu dị ka a na-ewere ha dị ka oke ike nke sitere n'okike. Ihe anyị na-ahụ bụ ebili mmiri na-abịa site na ime ụwa. E nwere ụdị dị iche iche nke seismic mmiri na ebili mmiri ha niile na-anọchi anya na seismogram.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị ebili mmiri dị iche iche na njirimara ha.
1 Olee otú ala ọma jijiji na-etolite
2 Seismic mmiri na ebili mmiri
3 Ofdị ebili mmiri ebili mmiri
Olee otú ala ọma jijiji na-etolite
Ala ọma jijiji ahụ ma ọ bụ ya onwe ya bụ ịma jijiji n’elu ụwa nke na-abịa site na ike ewepụtara na mberede nke sitere n’ime ime ụwa. Mwepụta nke ike a sitere na mmegharị nke tectonic plate ndị na-ahapụ ike n'oge mmegharị ha. Ha nwere ike ịdị iche na nha na ike. Earthqufọdụ ala ọma jijiji na-esighi ike nke na ọ naghị enwe mmekorita. Ndị ọzọ, Otú ọ dị, Ha na-eme ihe ike nke na ha na-ebibi obodo.
Ntọala ala ọma jijiji na-eme na mpaghara a maara dị ka ọrụ ala. Ọ na-ezo aka ugboro, ụdị na oke nke ala ọma jijiji ndị emetụgoro ebe a n'oge oge. N'elu ala, ala ọma jijiji ndị a na-egosipụta onwe ha site na ịma jijiji na ebe ha nwere na nwa oge.
Ha na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile na mbara ala, ma na nsọtụ nke tectonic plate, ma ọ bụ mmejọ ahụ. Anyị maara na ụwa anyị nwere 4 isi dị n'ime: isi dị n'ime, isi mpụta, akwa na akwa. N'elu uwe mgbokwasị ahụ nwere oke okwute ebe enwere ụfọdụ convection ugbu a nke bụ ndị na-akwalite mmegharị nke efere tectonic na, ya na ya, ala ọma jijiji.
Dịka anyị kwuburu, mmalite ala ọma jijiji bụ n'ihi mgbasa nke ebili mmiri na-eme na mbara ala. Anyị na-akọwa oke ebili mmiri dị ka ụdị ebili mmiri na-agbanwe na mgbasa nke mgbanwe nwa oge na mpaghara nrụgide na nke na-eweta obere mmegharị nke efere tectonic. Ọ bụ ezie na anyị kpọrọ aha na anyị nwere mmegharị nke mbadamba tectonic dị ka ndị dị otú a, anyị ga-amarịrị na mmegharị a bụ ihe a na-ahụ anya nke na ọ fọrọ nke nta ka a ghara ịghọta ya. Ọ bụkwa na ọtụtụ afọ teknụzụ ndị ahụ tectonic na-agagharị nwayọ karịa nke ha mere na ọtụtụ nde afọ ndị gara aga. Ebe kọntinent na-agagharị na nkezi nke 2 centimeters kwa afọ. Nke a bụ ụmụ mmadụ na-enweghị nghọta.
Ekwesiri ighota na enwere uzo di iche iche nke mmiri nwere ike imeputa. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ mmadụ nwere ike ịmepụta ebili mmiri seismic nke artificial site n'iji ihe mgbawa ma ọ bụ usoro mmịpụta gas dị ka egwu.
Ofdị ebili mmiri ebili mmiri
Ka anyi hu ihe bu udidi oke mmiri nke mmiri mmiri na mmiri na njirimara ha.ka anyi kwurula na mbu, mmiri seismic na esite na ime uwa ruo na ala. Agbanyeghị, ihe a niile akwụsịghị ebe a.
Ebili mmiri bụ nke na-agagharị n'ime ụwa. Anyị maara na ihe mejupụtara ime nke ụwa anyị dị oke mgbagwoju anya. Enwetara ozi a na e nwere ụdị ebili mmiri dị iche iche na-agbaso ụzọ Kurdish. Ọ bụ mmetụta dị ka nke na mgbapụ nke ebili mmiri ọkụ nwere ike inwe.
P ebili mmiri bụ ndị akọwapụtara dị ka ebili mmiri nke na-eme na ala abịakọrọ nke ukwuu ma bụrụ ebili mmiri ndị a na-agbatị na nduzi nke mgbasa. Njirimara bụ isi nke ebili mmiri a bụ na ha nwere ike ịgafe site na ihe ọ bụla, n'agbanyeghị ọnọdụ ọ dị. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ebili mmiri S. typedị ebili a nwere ntụgharị a na-agagharị na ntuziaka mgbasa. Ọzọkwa, o nwere nwayọ nwayọ karịa ebili mmiri P, ya mere ha pụtara ọtụtụ oge n'ọhịa. Ebili mmiri ndị a enweghị ike ịgbasa site na mmiri mmiri.
Seismology bụ sayensị nke a na-ahụ maka ịmụ banyere ala ọma jijiji. Nke a bụ otú o si amụ banyere nkesa ohere mbara igwe, usoro ndị a na-elekwasị anya na ịhapụ ike. Ihe omumu banyere mgbasa nke ebili mmiri nke ala oma jijiji na-emeputa ihe omuma banyere uzo ha di n'ime, mpaghara ha di na nkesa ha nke otutu na agbanwe. Site na ebili mmiri nke oke ala enweela ike ị nweta ọtụtụ ozi gbasara ime ụwa.
N'ihi ebili mmiri ndị a, anyị maara na ọ bụ ala ọma jijiji na-emepụta ha ma bụrụ nke ndị ọrụ mgbasa ozi na-agbanwe agbanwe na-ekpebi. Nke a pụtara na ọsọ ya dabere na njirimara mgbanwe nke onye na-ajụ ase ebe ọ malitere na nkesa ya nwere ike ịmụ site na ịlele oge njem na amplitudes nke ebili mmiri ndị a. Dịka anyị kwurula na mbụ, e nwere ụdị ebili mmiri abụọ dị egwu abụọ. Nke a na mgba dị iche iche na-agba. Ihe kachasị ọsọ na nke mbụ bụ ebili mmiri P. Ndị a na-akpọ ebili mmiri longitudinal kwekọrọ.
Ndị nke abụọ nwere ọsọ dị ala ma nwee agwa ntụgharị. Ha bụ ebili mmiri S. A na-eme omumu banyere ebili mmiri a site na iwu nke ntughari uche, ebe ọ bụ na e jikọtara ụwa anyị n'ụyọkọ nke nwere ihe ndị dịgasị iche iche na ihe ndị mejupụtara. A na-ekpebi ụzọ njem na oge mbata na-atụle mbadamba mbadamba, nke ọ bụla nwere ọsọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ na-atụle ụwa dị gburugburu.
N’elu ụwa na ihe ndị ọzọ na - akwụsị njiko, a na - emepụta ụdị ebili mmiri ndị ọzọ nke, n’ihi na ha na - agbasa n’akụkụ a, a na - akpọ ha mmiri. Ebili mmiri ndị a na-agbasa n'ọsọ dị ala karịa ndị nke ebili mmiri S ma ịdị ukwuu ha dịkwa obere, ebe ọ na-ebelata na omimi. E nwere ụdị abụọ nke ụdị ebili mmiri a: Rayleigh mmiri na ebili mmiri Lovehụnanya. Nke mbụ bụ nke kwụ otu ebe na nke abụọ bụ iji kwụ ọtọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ebili mmiri ala na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Seismic mmiri na ebili mmiri